Ogaden News Agency (ONA) – Wasiir Kusheega Warfaafinta Wayaanaha oo Jawaab Aan Laga Filaynin Bixiyay.
Wasiir Kusheega Warfaafinta Wayaanaha oo Jawaab Aan Laga Filaynin Bixiyay.
Barnaamijka lagu magacaabo Inside Story ee kabaxa TV-ga caalamiga ah ee Al-jazira ayaa waraysi dhinacyo badan taabanaya layeeshay Wasiir kusheega Warfaafinta ee xukuumada Wayaanaha Dr. Negeri Lencho wuxuuna wasiir kusheegu bixiyay xog aad ubadan oo horaan uusan bixin jirin.
Nagare Lenjo ayaa lawaydiiyay su’aalo dhowr ah oo aad u miisaan culus waxaana kamid ahaa raysal-wasaaraha cusub siday wax ugu hirgali doonaan ama sidee loola shaqayn doonaa kadib markii xilka lagu wareejiyo iyadoo uu xaalku sidan ucakiran yahay.
Dr. Nagare Lenjo ayaa sheegay in raysal-wasaaruhu uu yahay awooda ugu saraysa ee wadanka waxaana sidaas qaba ayuu yidhi dastuurka wadanka udagsan, waxaana lagu qasban yahay ayuu yidhi in lala shaqeeyo isna uu shaqadiisa qabsado.
Wasiir kusheega ayaa lawaydiiyay ciidanka Milatariga iyo kuwa sirdoonku malashaqayn doonaan raysal-wasaaraha anaga oo lasocona in aysan raysal-wasaarihii isaga kahoreeyay lashaqayn jirin, isla markaana uu iyaga kashaqayn waayay?
Wuxuuna su’aashaas kusoo gaabsaday sharcigu wuxuu qabaa in ay u hogaan samaan ciidamadu raysal-wasaaraha wadanka, waxaana jawaabtaas kamuuqatay cabsi badan oo uu kaqabay wasiirku wada shaqaynta ciidamada iyo xukuumada uu Abiye Axmed hogaamin doono.
Wasiirka Warfaafinta Wayaanaha ayaa markiisii ugu horaysay taariikhda kahadlay dimuqraadiyada Itoobiya, wuxuuna sheegay in raysal-wasaaraha cusub lagu sugayo in uu wadanka dimuqraadiyad dhab ah kusoo dabaalo isla markaana ay dadwaynuhu dareemaan cadaalad iyo in codkoodu uusoconayo.
Wasiir kusheega oo lawaydiiyay xiliga ay xukunka dag daga ah qaadi doonaan ayaa kujawaabay “anigu magaran karo xiliga laqaadayo xukunka ciidan ee wadanka saaran balse waxay ku xidhantahay sida ay hadba xaaladu tahay ayuu yidhi Dr. Nagare Lenjo”.
Golaha wasiirada ee wayaanaha ayaan looga baranin in ay sidan oo kale u hadlaan balse waxaad moodaa in kala daadashada xukuumada wayaanaha ay cidkasta ka faa’iidaysanayso.
Dhinaca kale gudi gaar ah oo u xilsaaran arimaha xuquuqda ee shacabka Itoobiya ayaa sheegay in mudadii yarayd ee xukunka dag daga ah uu wadanka Itoobiya saaraa laxidhay in kabadan 1000 qof oo shacab ah kuwaas oo xabsiyo kala duwan lagaliyay.